साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको ‘खोक्रो’ सहर बन्ला त साँच्चैको महानगर ? | Sagarmatha Chautari
साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको...
साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको ‘खोक्रो’ सहर बन्ला त साँच्चैको महानगर ?
विराटनगर - दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा मुलुककै कान्छो महानगर विराटनगरले छान्ने जनप्रतिनिधिसँग चुनौतीका चाङ छन् । युवा उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिएको यो ऐतिहासिक सहरका जनप्रतिनिधिले आगामी पाँच वर्षमा साखको आवरण मात्र बाँकी रहेको ‘खोक्रो’ सहरलाई साँच्चैको महानगरमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
विराटनगरस्थित स्नातकोत्तर क्याम्पसका प्राध्यापक डा. अर्जुन बराल पनि विराटनगरमा पुरानो इतिहास र साख कायम गर्ने हो भने एमाले, कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलले आर्थिक एजेन्डा र विकासलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
विराटनगर खोक्रो भइसकेको छ, कमसेकम पुरानो वैभव र इतिहासको तुलनामा । महासंघका केन्द्रीय सदस्य बोहरा विराटनगरको खोक्रो भइसकेको सानलाई तुरुन्तै विकास निर्माणले भर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । १०४ वर्षपहिल्यै नगरका रूपमा स्थापना भएको यो सहरको सम्भावना अहिले पनि उत्तिकै रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
- सडक, ढल, खानेपानी
- व्यवस्थित बसोबास
- रुग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालन
- बाल उद्यान, पर्यटकीय क्षेत्र
- रिङरोड निर्माण
- अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला
- क्षेत्रीय विमानस्थल
- विशेष आर्थिक क्षेत्र